Wararka - Ku dadaal inaad u dhisto carqalad amni oo loogu talagalay caafimaadka dadweynaha ee magaalooyinka
Guji taleefanka gacanta si aad si toos ah ballan uga samaysato waqtiga tijaabada nucleic acid, lacag bixinta khadka tooska ah, sambal goobta, xaqiiqda kadib natiijooyinka weydiinta khadka taleefanka gacanta… Badhtamaha Noofambar, Shanghai “Health Cloud Nucleic Acid Testing Registration Version 2.0 Launched waxaa loo bilaabay in loogu adeego dhaqaalaha qaab caqli, hufan, iyo raadraac ah Xawaaraha ka soo kabashada bulshada ayaa xoojiyay khadka ka hortagga cudurrada magaalooyinka.
Cudurka cusub ee faafa wuxuu ku dhuftaa oo uu “la tartamaa” fayraska. Shaqooyin cusub oo taxane ah oo aan horay loo arag ayaa si tartiib tartiib ah u soo dedejinaya sanadka 2020. Baabtiiskii dagaalka "faafa" ayaa sidoo kale dadka ka dhigay inay si qoto dheer uga warqabaan in nidaamka caafimaadka bulshada uu yahay qayb muhiim ah oo lagu hubinayo caafimaadka dadka oo dhan.
Sannad gaar ah, camal gaar ah! Kal-fadhigii 10aad ee Gudiga Kow iyo tobnaad ee Xisbiga Dowlada Hoose oo qabtay maalmo kahor ayaa xooga saaray baahida loo qabo in shaqo adag laga qabto dhameystirka Qorshaha 13-aad ee Shanta Sano iyo bilowga qorshaha 14-aad ee Shanta Sano. Marka la eego xaaladda faafa ee hadda jirta, waxaan had iyo jeer ilaalin doonnaa feejignaan sare, jawaab cilmiyaysan, jawaab celin xasaasi ah, iyo hirgelinta siyaasad sax ah, waxaan sii wadaynaa xoojinta kahortagga iyo xakamaynta iyo ka jawaab celinta xaaladaha degdegga ah ee caadiga ah, waxaanna qaban doonnaa shaqo adag oo ah "Aqbashada difaaca dibada iyo dib u soo celinta difaaca gudaha".
Naqshad cusub ayaa la soo saaray, oo safar cusub ayaa bilaabmaya. Nidaamka caafimaadka iyo caafimaadka ee Shanghai wuxuu hayaa himiladiisa, wuxuuna sameynayaa dadaal kasta oo lagu dhisayo caqabad nabadgelyada caafimaadka bulshada iyadoo la adeegsanayo xigmada aqoonta, habka looga jawaabayo, iyo geesinimada lagu raadinayo isbeddelka, si loo dhiso khad adag oo difaaca dadka nool, iyo in la qoro xilli cusub “magaalo, nolosha ka sii wanaajiso Cutubka cusub ee“ quruxda badan ”.
In kor loo qaado hore-u-eegista lana dhiso nidaam caafimaad oo dhammaystiran oo caafimaadka bulshada ah
Bishii Nofeembar 1, "Shuruucda Dawladda Hoose ee Shanghai ee Maamulka Caafimaadka Degdegga ah ee Caafimaadka Dadweynaha" ayaa dhaqan galay. Laga soo bilaabo kormeerida iyo digniinta ugu horeysa ilaa jawaab celinta xaaladaha degdega ah, khibradii hore ee wax ku oolka ahayd waxaa lagu soo koobay 10 cutub iyo 85 maqaalo. Abuuritaanka nidaam maareynta xaaladaha degdegga ah ee caafimaadka bulshada ee "kahortagga marka hore, nabadda iyo dagaalka oo la isku daro", Shanghai, magaalo weyn, waxay si joogto ah u dhiseysaa qadka difaaca dadweynaha oo aad u adag oo adag. Tani sidoo kale waa sharciyadii ugu horreeyay ee heer gobol ee ka hortagga iyo xakameynta cudurrada faafa.
Kahortaga cudurada faafa ee Dacheng waxay ubaahantahay jawaab deg deg ah oo sax ah, iyo waliba taageero hay'ad. Ku soo noqoshada waqtiga Janaayo 20, 2020, Shanghai waxay soo warisay kiiskii ugu horeeyay ee la xaqiijiyay ee cudurka oof-wareenka cusub; Markay ahayd Janaayo 24, Sannadkii Cusbaa ee Sannadka Cusub, Shanghai waxay soo saartay hanaan wax looga qabanayo xaaladaha degdegga ah ee caafimaadka bulshada. Dagaalkii "faafida" dagaalka ayaa horseeday isbeddelo ku yimid nidaamka qotada dheer. Bishii Abriil 7, Shanghai waxay qabatay shir ku saabsan dhismaha caafimaadka bulshada waxayna soo saartay "Fikrado dhowr ah oo ku saabsan Hagaajinta Ka Hortagga iyo Nidaamka Xakamaynta Cudurrada Faafa ee ugu Weyn iyo Hagaajinta Nidaamka Maareynta Xaaladda Degdegga ah ee Caafimaadka Dadweynaha" (oo loo yaqaan "Shanghai 20 Dhismaha Caafimaadka Dadweynaha"). Kulanku wuxuu si cad u sheegay: 2025 Shanghai waxay noqon doontaa mid ka mid ah magaalooyinka ugu adag nidaamka caafimaadka bulshada adduunka.
"Waxaan si firfircoon ula dagaallameynaa cudurka faafa, waxaan sidoo kale aqoonsan nahay oo aan kor u qaadeynaa guud ahaan dib u qaabeynta iyo casriyeynta nidaamka caafimaadka bulshada ee magaalooyinka, waxaana isku dayeynaa in aan daboolno raadadka dowlad-wanaaga amniga guud ee bulshada guud." Professor Luo Li, Xoghayaha Xisbiga ee Iskuulka Caafimaadka Dadweynaha ee Jaamacadda Fudan, ayaa u sheegay suxufiyiinta. “Caqliga” ka dambeeya dhismaha nidaam cayiman oo loogu tala galay maamul wanaaga badbaadada caafimaadka bulshada ee magaalooyinka waaweyn wuxuu ku yaalaa: Marka ugu horeysa, culeyska saarida ka hortaga ayaa ah in lagu gaaro digniinta ugu horayso iyadoo la ilaalinayo cudurada oo aad u xasaasi ah oo dhameystiran iyo nidaamka caafimaadka bulshada. Marka labaad, baacsiga "eber dhacdo" ma aha mid waafaqsan xaqiiqada. Sidaa darteed, marka kiisaska goosgooska ahi soo baxaan, sida loo demiyo "ololka" xawaaraha ugu dhakhsaha badan uguna kharashka yar loona ilaaliyo hawlgalka caadiga ah ee nolosha bulshada iyo dhaqaalaha waa waxa nidaamku raacayo.
"Marka laga eego aragtida hadda jirta, ka hortaggeenna saxda ah iyo ka-hortaggeena iyo dhaqso u tuurista kiisaskii u dambeeyay ee goosgooska ah waxay durbaba muujisay wax-ku-oolnimada kor-u-qaadista iyo dhismaha caafimaadka bulshada magaalooyinka." Luo Li wuxuu sheegay in dagaalka lagula jiro cudurka cusub ee sambabka ee faafa, Shanghai ay leedahay 117 shirkadood oo magaalada oo dhan ah. Rugaha caafimaadka ee qandhada iyo 200 rugo caafimaad oo loo diro bulshada ayaa door muhiim ah ka qaatay "bannaanka". Mustaqbalka rajaynaynaa, si loo dhiso “gidaar naxaas iyo bir ah” oo loogu talagalay ka hortagga iyo xakamaynta faafa ee magaalada, laga bilaabo kor u qaadista nidaamka caafimaadka bulshada ilaa dhismaha nidaamyada edbinta iyo talanti sida infekshannada, cudurrada neef-mareenka, iyo daaweynta daryeelka halista ah waxay noqon doontaa hawl muddo-dheer ah, oo u baahan adkeysi. Si loo fuliyo, waxaa lagama maarmaan ah in la xoojiyo qaabeynta hore-u-eegista iyo dejinta qorshaha, lana fahmo hindisaha shaqada.
Si sax ah loola kulmo baahiyaha dadka lana dardar-geliyo is-beddelka "Isbitaalka Digital Digital"
Fadhigii loo dhan yahay wuxuu tilmaamay inaan si buuxda u dhiirrigelinno isbeddelka dhijitaalka ah ee magaalooyinka. Isbadalka dhijitaalka ah ee magaalooyinku waa maado nooc cusub ah, injineernimada nidaamka, oo daboolaysa dhammaan dhinacyada wax soo saarka magaalooyinka, nolosha, iyo bey'ada, oo ay ku jiraan dijital dhaqaale, dijitaalista nolosha, iyo dijitalinta maamulka.
Dardargalinta isbadalka dhijitaalka ah iyo dhisida isbitaalada "caqliga badan" waa waxa dadku hada rabaan. Sida laga soo xigtay tirakoobkii ugu dambeeyay, 43 cisbitaal internet oo ku yaal Shanghai ayaa bilaabay adeegyada ogaanshaha iyo daaweynta internetka, "Internet + Kalkaalinta Adeegyada" wali waxaa lagu tijaabinayaa 4 degmo oo ay ku jiraan Changning, Jing'an, Putuo, iyo Pudong.
Isbitaalka Dhexe ee Degmada Xuhui, tan iyo markii uu noqday isbitaalkii ugu horreeyay ee dowladeed ee ku yaal magaalada Shanghai ee hela ruqsadda isbitaalka Internetka bishii Febraayo ee sannadkan, la-talinta caafimaad ee khadka tooska ah, la-tashiga "daruur", bixinta ceymiska caafimaadka ee khadka tooska ah, iyo bixinta guryaha ee daawooyinka dhammaantood laga dareemay isbitaalkan. Laga bilaabo Nofeembar 27, "Isbitaalka Xuhuiyun" wuxuu qaabilay in ka badan 35,000 oo dhakhaatiir ah wuxuuna soo saaray 6,557 daawo-qoris. "Dhakhtarka oo aad ku aragtid guriga adiga oo aan guriga ka bixin" ayaa nolol maalmeed u noqotay dad aad iyo aad u tiro badan.
“Thanks to taageerada siyaasado taxane ah, Isbitaalka Xuhuiyun wuxuu gaaray horumar muuqda. Waqtigan xaadirka ah, celceliska tirada la-talinta khadka tooska ah maalin kasta waa 400-500, iyo tayada la-talinta ayaa sidoo kale ka dhigtay boodbood tayo leh: la-tashiga caafimaad ee fudud ayaa ah tiro yar, iyo baahida loo qabo adeegyada daryeelka caafimaadka ayaa ah midka guud. Marka la soo koobo, waxa aan qaadno waa 'caafimaadka kaliya ee loo baahan yahay' ee dadka caamka ah oo aan xallinno dhibaatooyin taxane ah oo taxane ah. ” ayuu yiri Zhu Fu, oo ah agaasimaha guud ee Isbitaalka Dhexe ee Degmada Xuhui.
Horumarinta iyo adeegsiga xogta caafimaadka ayaa horeyba ugu duugan nolosha muwaadiniinta Shanghai. Ka dib markii uu dillaacay, "koodhka arjiga leh" wuxuu noqday "qaabeynta qaab-dhismeedka" ee muwaadiniinta Shanghai u safraya, taas oo aan ka dhigin kaliya mid ku habboon muwaadiniinta, laakiin sidoo kale hoos u dhigtay cadaadiska ka hortagga iyo xakameynta cudurrada asaasiga ah. Meel muhiim ah oo laga bilaabo “hal shabakad oo furan” iyo “hal shabakad maamul mideysan”, codsigan si dhakhso leh loo bilaabay kuma uusan joogsanin “tallaabooyinka ku habboon”, laakiin wuxuu sii waday inuu ballaariyo xaaladdiisa dalab, isagoo u beddelaya koodhka adeegga muwaadin ee la qaadan karo berrinka maamulka iyo adeegyada bulshada.
Rugta bukaan socodka ee Isbitaalka Bariga ee Cusbitaalka Renji, Ms. Li waxay saf ugu jirtay daaqadda diiwaangelinta waxayna ogaatay inay subaxdii ku degdegeyso oo aysan keenin kaarka ceymiska caafimaadka. Waxaa layaab leh, isbitaalku wuxuu bilaabay hawl cusub oo lagu taageerayo “wax kala iibsiga tuurista” ee kaarka caymiska caafimaadka, taas oo ah, adeegso taleefanka gacanta si aad uga dalbato caymiska caafimaadka shahaado elektaroonig ah oo khadka tooska ah ah. Ka dib marka dalabku guuleysto, daaqada ku baar lambarka QR oo kaliya ku dhageyso "di" Hal cod, diiwaangelinta ballanta caymiska caafimaadka waa la dhammaystiray.
Thanks to "One Net Service" oo bilaabaya "Hal Wax oo loogu talagalay Bixinta Caafimaadka", "Codsiga Codsiga" iyo "Caymiska Caafimaadka ee Caymiska Caafimaadka" ayaa isku xiran, oo hadda muwaadiniinta Shanghai waxay isticmaali karaan "Codsiga Codsiga" si ay u codsadaan diiwaangelinta isbitaalada dadweynaha. magaalada oo dhan. Daaweyn caafimaad, lacag bixin iyo habab kale.
Kajawaabida shuruudaha khaaska ah ee "aan la-xiriirin" ee cudurada faafa, waxay kicin doontaa in isbitaalada jirka loo badalo "isbitaalada casriga ah ee casriga ah". Zhu Fu wuxuu u sheegay wariyeyaasha in barnaamijka Xuhuiyun Hospital wali uu shaqeynayo. Mustaqbalka, adeegyada caafimaadka ee internetka waxay sii wadi doonaan inay si sax ah u daboolaan baahiyaha caafimaad ee dadka, ayna sahamiyaan isbeddelo qoto dheer oo ay la socdaan mas'uuliyiinta xakamaynta iyo aaladaha tikniyoolajiyadda.
Isagoo wajahaya webiga 'Yangtze River Delta' iyo wajahaya dalka oo dhan, si joogto ah u hagaajinaya heerka adeegga caafimaadka
Dhamaadka sanadka, waxaa jira war wanaagsan oo dadka ka farxiya: Shanghai waxay dhameystirtay howlaha sanadlaha ah ee ka horreeyay jadwalka dhammaadka Oktoobar 26 mashruucyo wax ku ool ah oo dowladda hoose ka fulisay 10 aag sannadkan.
Qaadida tillaabadii hore si loo qorsheeyo qaabka, sii wad si xoog leh diirada u saarida maaraynta geedi socodka, si dadku ay u helaan dareen dhab ah oo kasbasho. 26-ka mashruuc ee wax ku oolka ah ee dowladda hoose waxaa ka mid ah: in lagu daro 7,000 oo sariirood oo loogu talagalay dadka waayeelka ah, iyo in la dhiso 50 bulsho oo cusub oo dhammaantood laga dhigo xarumo adeeg oo duug ah; 200 goobood oo loogu talagalay dadka waayeelka ah, loona dayactiray 2,000 oo sariirood oo loogu talagalay daryeelka kalkaalinta naafada fahanka; cusub oo la dhisay 11 xaalad caafimaad oo deg deg ah (120); lagu daray 100 xarumood oo caaqil caafimaad leh, iwm.
Iyada oo ku saleysan Qingpu, oo u adeegta Delta Delta River Yangtze, oo wajaheysa dalka oo dhan, Oktoobar 24, Isbitaalka Internetka ee Yangtze River Delta (Shanghai) ayaa la bilaabay. Waxay ku tiirsan tahay taageerada ganacsiga ee Isbitaalka Zhongshan ee ku xiran Jaamacadda Fudan waxayna ku saleysan tahay dhismaha Isbitaalka Dadka ee Zhujiajiao ee Degmada Qingpu si loo dhexgeliyo ilaha caafimaadka ee tayada sare leh ee gobolka Yangtze River Delta. , Si loo xoojiyo heerka adeegga caafimaadka ee Yangtze River Delta Eco-Green Integrated Development Development Zone, iyo in la sii wado wadista horumarinta daawada caqliga leh, saadka caafimaadka, caymiska ganacsiga, iyo dalxiiska caafimaadka ee aagga banaanbaxa Yangtze Delta.
Isbitaalka Internet-ka ee Yangtze River Delta (Shanghai) ayaa dhameystiray wejiga koowaad ee dhismaha, waxaana jira qorshooyin wajiga labaad ee dhismaha. Wu Jinglei, oo ah agaasimaha Komishanka Caafimaadka ee Dawlada Hoose ee Shanghai, markii uu ka hadlayey aragtida fog ee Isbitaalka Internetka ee Yangtze Delta Delta, wuxuu si gaar ah u xusay inuu rajeynayo in isbitaalkan, oo ku dhashay astaamaha Internetka, uu diirada saari doono khibrada bukaan socodka, ku lifaaq Muhiimadda isku xirnaanta, oo si adag uga shaqeysa arimahan tijaabada ah ee hal-abuurnimada tikniyoolajiyadda caafimaadka. "Sii wad dhageysiga khibrada caafimaad ee dadka caadiga ah, oo si joogto ah u hagaaji qaabka adeegga, si aad u noqotid goob caafimaad oo caqli-gal ah oo ku taal Yangtze River Delta, dalka oo dhan iyo xitaa Aasiya, oo horseed u ah horumarka mustaqbalka."
Maskaxda ku hayso xaaladda guud, u adeeg xaaladda guud, oo fur ciyaar cusub, mustaqbalka waa la filan karaa. Bishan, oo ah mid ka mid ah mashaariicda ugu muhiimsan ee “Waxqabadka Caafimaadka Shanghai (2019-2030)”, ayaa la dhameystiray qorshihii dhismaha nidaamka qiimeynta saameynta caafimaad ee ugu horreeyay ee dalka, kaas oo si nidaamsan u qiimeyn doona saameynta qorshooyinka waaweyn ee horumarinta dhaqaalaha iyo bulshada. , iyo mashaariicda injineernimada ee caafimaadka bulshada. saamayn. “Caafimaadka waxaa lagu dhex daray dhammaan xeeladaha”, Shanghai waxay sii wadaa inay wax ka qabato oo ay si wadajir ah uga shaqeyso sidii si wanaagsan loo ilaalin lahaa caafimaadka dadka.
Waqtiga boostada: Dec-04-2020